रोग निम्त्याउन सक्छ कब्जियतले | Yopoho Directory
कब्जियत हुनुको विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । जस्तै: सुत्ने र उठ्ने कार्य नियमित नहुनु, घरमा सहि रुपमा हावाको आवत जावत हुन नपाउनु, बिहान पानीको सट्टा अन्य कृत्रिम पेय पदार्थको सेवन गर्नु, बिहान मर्निङ वाल्क नगर्नु आदि ।
कब्जियत कसरी हुन्छ ? र यसले स्वास्थ्यमा कसरी प्रभाव पार्छ त ? हामी दिनमा कम्तिमा दूई पटक खाने कुरा खान्छौ । यदि त्यो खानेकुरा पचिसके पछि पनि हाम्रो आन्द्रामा नै रहिरहन्छ भने कब्जियत हुन्छ । पाचन प्रक्रियाको नियम अनुसार यदि दूई पटक खाना खाइन्छ भने दूई पटक नै टोइलेट जानु पर्छ । यदि दिनको एक पटक टोइलेट गइन्छ तर पेट सफा भएको छैन भने कब्जियत भएको हुन सक्छ । दिनमा दूई तिन पटक टोइलेट जानु र निकै दिन सम्म टोइलेट नहुनु पनि कब्जियतको लक्षण हुन सक्छ ।
कब्जियतको लक्षण जस्तो सुकै भए पनि यसको कारण पाचन प्रक्रियामा असंतुलन हुनु हो । डाक्टरहरुका अनुसार दुषित खानपानका कारण पाचन शक्ति संतुलित रहन सक्दैन । यस बाहेक सुख्खा खाना खानु, पानी कम पीउनु, चिया तथा कफिको बढि सेवन, धुम्रपान, गुट्खा, रक्सीको सेवन, टाइेलेट लागेको बेला रोक्नु, शारीरिक व्यायाम नगर्नु, परिश्रम गरे पछि आराम नगर्नु, मैदा र बेसन युक्त तारेको खानाको बढि सेवन, भोक नलागि खान खानु, छिटो, छिटो खानु दिनभरि खानेकुरा खाइरहनु, पिरो तथा मसलादार खानेकुराको बढि सेवन, अचारको सेवन, खानेकुरामा दाल तथा हरियो साग सब्जिको अभाव, खाना साथ काममा लाग्नु आदिले पाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ । साथै कालो दाल, राजमा, भिन्डी तथा बासी खानेकुराले पनि कब्जियत हुन्छ ।
– खाना बिस्तारै राम्ररी चपाएर खानु पर्छ । खानाको बिचमा आवश्यक भए मात्र पानी पीउनु पर्छ ।
– घीउँ, नौनी, केरा बाहेक सबै किसिमका फलहरु सलाद तथा अंकुरित अन्नको सेवन गर्नुपर्छ ।
Previous: विश्वासिलो जीवन साथी बनौं
Next: सकारात्मक सोचको शक्ति